Chirungu cheChirungu: hurumende ichabhadhara zvinopfuura 200 avo vakaurayiwa pamoto weMankon - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO Chirungu cheChirungu: hurumende ichabhadhara zvinopfuura 200 vakaurayiwa pamoto weMankon
Chirungu cheChirungu: hurumende ichabhadhara zvinopfuura 200 vakaurayiwa pamoto weMankon
Gavhuna weNorth West-West, Adolphe Lele Lafrique, akanyaradza avo vakaurayiwa naMile 8 kuAlachu kuBamenda, vachizivisa kuti Mutungamiri Paul Biya achavatsiva nokuda kwekurasikirwa kwavo.
Akanga ari mumunda zuva rimwe mushure mokunge vaparadzati vauraya vaviri vakuru vakuru vehondo. Gavhuna akarambidza chiito ichi pamusangano mutsva nemutongi wechechi weMankon, His Royal Highness Angwafor III, uye meya wekugoverwa kweBamenda II. Meya Balick Awah Fidelis akazvidemba kuti vanhu vanopfuura 200 vakavhiringidzwa nechiitiko chacho.
Kunyange zvazvo zvapupu zvizhinji zvakapomera hondo yekuisa moto kune dzimba idzi, VaPresident weZviviri, Joseph Beti Assomo, vakati mapurisa akanga avhurwa kuti awane avo vaipara vakapisa uye vakapisa dzimba. vakapamba zvinhu kubva kuvanhu.
Akavimbisa hurumende yenyika uye yepamarudzi ose kuti mauto akazvipira kuzadzikisa basa rayo rekuchengetedza kutendeseka kwenyika uye kuparadza ugandanga nenzira dzose. Akadana vanhu vanogara munzvimbo dzakagadzikana kuti vabatane zvikuru neuto.
Ambazoni varwi vakauraya mauto maviri kuMire 8, Alachu Mankon, musi weChitatu 15 May. Izvi zvakakonzera kukanganisa uye hondo yehondo yakaparadza dzimba dzinoverengeka, kliniki yemunharaunda, kereke, uye motokari, pakati pevamwe.
Iyi haisi nguva yokutanga musha wakapiswa pasi neuto mushure mekuponda kweumwe wavo munharaunda yacho. Iyo mitsara inotaura kuti zvisinei misha ye100 yakanga ichangobva kuparadzwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero nekuNorth West mauto nemasoja akazvitsvaga.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/05/18/crise-anglophone-le-gouvernement-indemnisera-plus-de-200-victimes-de-lincendie-de-mankon/
iyo "nhema" tsamba yaVladimir Putin kuna Paul BIYA
Cameroon - Mhirizhonga yeAnglophone: Kuvimbiswa kweMutungamiri weSanta muNorth West-West, anenge makore maviri mushure meKubata kwake Kidnapping.